Azerbaijana: Nolavina ny fangatahana ny fampakarana ny raharaham-pitsarana ho an’ireo bilaogera mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2018 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, বাংলা, polski, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 11 Aogositra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Natao ny fitoriana farany mba hampakarana ny raharaha momba ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo ho tsy meloka raha tsy misy ny porofo avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna raha mbola tsy nisy akory ny fanadihadiana sy ny fitsarana ara-dalana natao.
Nokasaina hatao manodidina ny 8 Septambra 2009 na tamin'io andro io ny fitsarana. Raha hita fa meloka izy ireo, dia mety ho voasazy roa taona sy tapany an-tranomaizina ireo zatovolahy.
Nambaran'ny Hetsiky ny tanora OL! tao amin'ny Twitter fa nolavina ny fampakarana ny raharaha . Ny iray tamin'ireo voampanga roa, Adnan Hajizadeh, no mpanorina ny vondrona.
Androany amin'ny telo ora tolakandro, ny Fitsarana ao Sebail dia handinika ny fampiakarana ny raharaha nataon'i Adnan Hajizade sy Emin Milli, mikasika ny fanitsakitsahana ny ny zon'izy ireo ho tsy meloka raha tsy misy ny porofo.
Nandà ny fangatahana ny fitsarana .
Nandritra izany fotoana izany, nanambara ny bilaogin'ny fikambanana OL! fa niara-nivondrona tamin'ny fikambanana mihoatra ny am-polony hafa sy ny vondrona iraisam-pirenena ny hetsiky ny tanora albaney Mjaft! tamin'ny fanamelohana ny fisamborana ireo bilaogera mpikatroka.
Nanamarika ny Mjaft fa tsy resaka fitsikerana fotsiny ny toe-draharaha no atao, fa indrindra ny fanohanana mivantana an'ireo izay “miaro ny soatoavina izay inoantsika rehetra.” Nanambara ny fanohanany an'i Adnan sy i Emin ny fikambanana Mjaft : “Tsy ady manokana ho an'ireo mpikatroka Azeri izy ity fa ady iraisana handravana ny lova ara-politikantsika taloha.”
Nanaraka akaiky ny raharaha ny fikambanana iray hafa, dia ny Reporters Sans Frontières izay nandefa ny vaovao momba ny fandavana ny fampakarana ny raharaha tao amin'ny bilaoginy. Naneho ihany koa ny fisalasalany momba ny maha ara-dalàna ny raharaha anenjehana ireo lehilahy roa ireo izy.
Nampidirina am-ponja nandritra ny roa volana ireo bilaogera roa mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo izay mifototra amin'ny fiampangana noforonina tamin'ny fandrobana. Araka ny loharanom-baovao diplaomatika, niantso azy ireo ho “jiolahimboto” ny Filoha Ilham Aliyev, nandritra ny fihaonana tamin'ny delegasiona ofisialy avy amin'ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy ny Fiaraha-miasa any Eoropa.
Tsy mbola navela notsidihan'ny fianakaviany ireo bilaogera roa hatramin'ny nisamborana azy ny 8 Jolay, 2009. Tsy azo natrehana ny fitsarana. Nilaza ny mpisolovava an'i Zadeh, Isakhan Ashurov, fa hampiakatra ilay didy izy.
Nandritra ny antsafa niarahana tamin'ny Global Voices, nilaza i Bart Woord, Sekretera Jeneralin'ny Federasiona Iraisam-pirenena ho an'ny Tanora Liberaly (IFLRY), fa raha araka ny heviny dia efa vita mialoha ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanamelohana ireo bilaogera mpikatroka roa higadra roa ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina .
21 Oktobra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy